Cinnamon ezinakekelwa izinwele
I-Cinnamon isetshenziselwa ukudlala izitsha neziphuzo ezihlukahlukene isikhathi eside, ngoba yengeza kunoma yisiphi isidlo into engavamile, ephuzizayo, ephunga elimnandi, kubaluleke kakhulu ekukhiqizeni iwayini elixubile futhi kubhekwa ukugcwaliswa okuhle kakhulu kwamabhanki amahle. Kodwa iqiniso lokuthi uyakwazi ukunikeza ngaphezulu futhi impilo izinwele zethu, bambalwa abantu baye bazwa. Ama-masks, afaka nesinamoni, adingekayo ekwelapheni izinwele ezibophayo, ezinobunzima, ezimelekile. Uma usebenzisa i-mask, uzobona ngokushesha imiphumela: izinwele zakho zizokhazimulayo, zikhanyise kahle. I-Cinamnamon Essential Oil for Hair
Ngaphezu kwekinamoni enopulangwe, izinwele zisetshenziselwa amafutha abalulekile. Ikhanyisa izinwele ezibophayo, ivuselela isakhiwo sayo, iqinisa izimpande futhi yiqiniso, inikeza iphunga elimangalisayo, elimangalisayo le-sinamoni.
Sebenzisa amafutha e-cinnamon ngezinwele akulula: udinga ukwehla amaconsi ambalwa abe i-shampoo evamile kanye ne-balm. Ukuze uthuthukise umphumela, kufanele uhlanganise amaconsi ambalwa amafutha ngokuqondile emgodini wokusetshenziswa komunye, athululelwe entendeni yesandla. Umphumela ongakwazi ukuwuhlola ngokushesha, futhi ngokusebenzisa isikhathi eside izinwele zakho zizoba ngcono futhi zibe ngcono.
Shintsha umbala wezinwele usebenzisa isinamoni
Ekuqaleni, kufanele kuqashelwe ukuthi zonke izicathulo zezinwele, ezibandakanya isinamoni, zinomphumela wokucacisa, ngoba isinamoni ingumbala wemvelo. Ukuqhubeka kulokhu, ama-blondes angasebenzisa izidwebo ezinjalo ukuze nje avuselele umbala, kodwa futhi ukunikeza izinwele zabo ezimhlophe umthunzi omusha. Kodwa ama-brunettes anezinwele ezintsha zezinwele. Kufanelekile ukucabangela, ukusebenzisa i-mask esekelwe sinamoni. Kodwa-ke, singakuqinisekisa: i-sinamoni ngeke ihlinzeke ngemiphumela enhle njengokupendeka kwamakhemikhali, kodwa, njengamanye amancane angokwemvelo. Noma yiluphi ushintsho lombala luzoba buthaka, kancane kancane futhi lube ngumzimba. Yingakho ungazama futhi abantu abakuzungezile bazoba abachwepheshe bokuhle bakho.
Amasks asekelwe sinamoni ngezinwele
Mask ukukhanya . Udinga ukuthatha isipuni esincane se-sinamoni oluyimpuphu, ukuxubane nesasikisi sakho esivamile noma izinwele zezinwele futhi usebenzise ukusikhipha imishini kuhamba ngezinwele ezimanzi ngemuva kokugeza. Bamba imaski imizuzu engu-10-20 bese ugeza ngamanzi afudumele. Isikhathi sokuvezwa kwezinwele ozikhethela zona, kuye ngokuthi isimo sezinwele.
Isihlamba sezinwele esisekelwe uju nesinamoni kufanele sisetshenziswe ngqo ngaphambi kokugeza izinwele zakho. Thatha izipuni ezimbalwa uju, inani elifanayo lama-croissants enopolisiwe. Hlanganisa konke lokhu ngokucophelela, ngenkathi uhlanza ingxube ngamanzi amancane afudumele. Ingxube kufanele ifane ngokufana ne-kefir ebanzi noma ukhilimu omuncu omuncu. I-mask kufanele isetshenziswe ezinhlambini ezincibilikile, bese ifudumala ngepakethe kanye nethawula, ubamba cishe isigamu sehora noma cishe ihora, bese ugeza bese ugeza ikhanda lakho njengokujwayelekile. Lapha, isikhathi sokuvezwa kwe-mask ezinyaweni ozikhethela zona, ngokubhekisela esimweni sezinwele, kanye nesifiso sakho sokunikeza izinwele umthunzi othize.
Mask of ithonya elikhulu ukubuyisela izinwele ezibuthakathaka nezibuthakathaka . Thatha amaqabunga ambalwa amafutha omnqumo, izinkezo ezimbalwa ze-mustard enopulini. Geza amafutha ekamelweni lokushisa, faka isinamoni kulo, hlanganisa kahle ukuze kungabikho izimpande. Manje ngobumnene, ngokulinganayo, ngosizo lwe-hairbrush usakaze ingxube ezimpandeni kuyo yonke ubude bezinwele. Uma unezinwele ezinzima nezinwele, khona-ke ungadinga okungaphezulu kwe-mask. Emva kokufaka izinwele ngokugqoka ngokucophelela ifilimu yokudla, uzidonsa zibe yisitumbulu, futhi zifudumala ngethawula. Kunconywa ukuba ugeze ihora ngemuva kokufaka isicelo, kodwa kungase kube nokutholakala isikhathi eside uma ubona kuyadingeka.
Indlela yokuphatha izinwele ezomile nezimele?
Hlala, udilikajele: ungasusa kanjani i-seborrhea ekhaya
Ama-curls amahle: i-mask ngezinwele ezinobomvu obomvu
Izinwele zokubheka kahle ze-bbw
Ukunakekelwa kohlanzekile nezinwele
Ukuthayipha izinwele ezide eziphakathi
Ungamisa kanjani ukufakwa kwezinwele
I-Chebureks enezinhlanzi zokugcwalisa izinhlanzi
Ungayigcina kanjani isikhumba esincane nesidla?
U-Alexei Vorobyov utshele ngobulili kule phrojekthi "Isiqu se-4"
Izandla ezisuka ku-chestnuts esihlokweni I-autumn yezingane ezineminyaka engu-3-5 ubudala (iqembu eliphakathi naphezulu lale enkulisa) kanye nobudala besikole
Imibukiso ku-VC ibhekwa kanjani, indlela yokuyibuka nokuyivuselela - imfundo yesinyathelo ngesinyathelo kwividiyo
Ukukhulelwa okuningi: amawele amabili
Iyini imvume yezinwele?
I-Horoscope yonyaka we-tiger ngezintombi
UMikhail Teryokhin: "Ngikhathazekile ngoKsyusha"
I-French rice pudding
Yikuphi ukuthutha okudinga ukugqoka isibonakaliso se-zodiac
Iyini ikhukhu neliphupho elifile mayelana nokuchazwa kwencwadi yephupho?
Indlela yokuphuza i-tequila
Jamu kusuka ku-cranberries nama-apula
Umnakekeli wesondlo emndenini ungowesifazane
Kuphi ukufihla imithi ebantwaneni?